Daawo Sawirada : Dal Yurub ku yaal oo 20 Sano oo Xarig ah ku riday Imam Dhalinyarada u diri jiray inay u dagaalamaan Daacish . - iftineducation.com
iftineducation.com – Daawo Sawirada : Dal Yurub ku yaal oo 20 Sano oo Xarig ah ku riday Imam Dhalinyarada u diri jiray inay u dagaalamaan Daacish .
Mid ka mid ah dalalka Yurub ayaa xukun adag oo 20 sano ah u jaray Imam lagu helay cadeeynta ah in uu Dhalinyarada tashkiilin jiray una diri jiray si ay ugu safraan dalka Siiriya ka dibna ugu dagaalamaan kooxda Daacish .
Imaamkaan oo u dhashay Seerbiyiinta Bosnia ayaa waxaa lagu magacaabaa Mirsat Omerovic balse waxaa loogu yeeri jiray (Abu Uteyma) , kaas oo lagu helay telfoono uu kula xiriiri jiray Dhalinyaro badan oo aaday ama u safartay dalalka Ciraaq iyo Siiriya una dagaalamayay kooxda Daacish .
Dacwada kiiskaan adag oo mudo 6 bilood ah soo jiitameysay waxa ay ka dhacday gudaha dalka Austria ee Qaarada Yurub waxaana cajiib noqotay ka dib markii ay gudaha Maxkamada soo xaadireen Waalidiin Muslimiin ah oo ilmeenaya kuna eedeeyay Imam Mirsat Omerovic in uu caruurtooda u diray gudaha dalka Siiriya waliba qaarkood ay halkaas ku geeriyoodeen .
Mirsat Omerovic (Abu Uteyma) ayaa sidoo kale waxaa lagu helay cadeeynta ah in uu lacago fara badan u aruurin jiray kooxda Daacish . Dhalinyarada uu dagaalada u diray imaamkaan ayaa waxa ay ka soo kala jeedaan dalalka Jeejniya , Bosnia , Turkiga iyo Afghanistaan balse dhamaantood waxeey ku dhasheen ama ku soo koreen gudaha dalka Austria .